I-Udo Hau Mok-gil 52 Rent House # Ocean View # Eduze nolwandle # Duplex # Kuthule + Epholileyo - I-Airbnb
I-Udo Hau Mok-gil 52 Rent House # Ocean View # Eduze nolwandle # Duplex # Kuthule + Epholileyo
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguGoonja
Le yindlu entsha yamaplanga yaseKhanada apho ungahlala uze ubukele ukuwa kolwandle kwicala lasentshona ye-Udo. I-Olle Trail 1-1 igqitha phambi kwendlu, kwaye ithule kwaye itofotofo, ikude kwindlela engaselunxwemeni phakathi emini, nangona ufikelela elwandle nje umzuzu. Le yindlu eqeshisayo eyakhiwe yaza yasetyenziswa ukuze yabelane 'ngobomi' ekhaya ', apho unokonwabela ingokuhlwa ethe cwaka kunye nentsasa epholileyo e-Udo. Ndiyathemba ukuba uza kuyinyamekela njengekhaya lakho uze uhlale kamnandi njengekhaya lakho.
Uza kusebenzisa elinye lamagumbi amane eendwendwe aphantse afane kwisakhiwo nakwindawo engaphakathi.
- Le yindlu evulekileyo enee-pyeong eziyi-22, indlu entsha yamaplanga yaseKhanada enesilingi ephezulu neendawo ezivulekileyo zesibhakabhaka.
- Unokubona ulwandle kwicala lasentshona ye-Udo ukusuka kwintente kumgangatho wokuqala kunye nomgangatho wesibini we-earoom.
- Kukho iveranda enkulu ejonge ulwandle phakathi komnyango wangaphambili wamagumbi ayi-4 kunye nendawo yokupaka enamagumbi aliqela.
- I-WiFi yasimahla yomntu ngamnye kwindlu nganye iyafumaneka.
- Sinikezela ngeekhabhathi zekofu zasimahla ze-Nespresso, kuxhomekeka kwinani labantu ababhukishileyo. (I- capsule enye ngosuku, inokuthengwa nangakumbi)
Idilesi yendawo yokuhlala ngu- "52 Hau Mok-gil, Udo-myeon, Jeju-si, Jeju Special Self-Governing Province". Ikufutshane ne-100m ukusuka kunxweme olusemntla-ntshona we-Udo. Ukuba uhamba iikhilomitha eziyi-1.2 ngaphaya kwesiqithi ngakwindlela esedolophini, ungafikelela kwi-Hago-dong Beach kunxweme olusempuma. Ukuba uqhuba ibhayisekile yasekuseni kwindlela engaselunxwemeni, uza kukhawuleza ubone ukuphuma kwelanga kumaza amakhulu kufutshane neBiyangdo. I-Seobin Baeksa (iCoral Beach) ikwimizuzu eyi-5 xa uhamba ngemoto.
(Iikhilomitha eziyi-5) Izinto ezinokusetyenziswa ziquka iHanaro Mart kunye negumbi lokuzivocavoca elikwimizuzu eyi-5 xa uhamba ngemoto (iikhilomitha eziyi-1.4), kunye neHau Mok Dong Port kwimizuzu eyi-3 (iikhilomitha eziyi-1).
Umbuki zindwendwe ngu- Goonja
Ukubhukisha akubhatalelwa iiyure eziyi-24 ngosuku, ibe ukuphendula kunxibelelana ukususela ngo-7: 00 kusasa ukuya ngo-8: 00 ebusuku. Zive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi ukuba unezinto ezingxamisekileyo ozidingayo ngexesha lokuhlala kwakho.
Ukubhukisha akubhatalelwa iiyure eziyi-24 ngosuku, ibe ukuphendula kunxibelelana ukususela ngo-7: 00 kusasa ukuya ngo-8: 00 ebusuku. Zive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi ukuba…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- 우도면, 제주시